Somalia: Haweenay Taratan Adag kaddib Guul Taariikhiya Ku Kasbatay Shirgudoonka Baarlamaanka - #1Araweelo News Network
Sacdiya loollan adag kaddib waxay noqotay Haweenaydii u horaysay ee Shirgudoonka Baarlamaanka Soomaaliya
Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Aqalka hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya, Image File, Araweelo News Network, 28 April 2022.
Muqdisho(ANN)-Guddoomiye ku xigeenada Guddoomiyaasha Aqalka hoose ee dawladda Federaalka Soomaaliya, ayaa la doortay kaddib tartan adag, iyadoo goobta lagu qabtay doorashada ee Teenshada Afasiyoone si weyn loo ilaalinayay amaankeeda, maadaama ay cabsi ku gedaanayd.
Haweenay Xildhibaan ah oo magaceedu yahay Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar ayaa loo doortay Guddoomiye ku xigeenka Koowaad ee Gollaha Shacabka Baarlamanka Federaalka Soomaaliya, taas oo kusoo baxday tartan xaasaasi ah iyo loollan adag oo xamaasadaysan.
Xildhibaan Sacdiya Yaasiin oo muujisay loollan adag oo ay ku waajahday Xildhibaan Maxamed Cali Cumar (Caana-nuug), waxay isla soo gaadheen wareegga saddexaad, waxayna kaga guulaystay wareegii u danbeeyay 137 cod, halka xildhibaanka haweenaydaa tartanka adag la galay Maxamed Cali Cumar uu helay 107 cod oo keliya. Sidaana waxa ku guulaystay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Xildhibaan Sacdiyo.
Haweenayda oo ka mid ahayd xubnaha Baarlamaanka ee laga soo xulay maamul gobolleedka Puntland ee Soomaaliya, ayaa noqonay tii u horaysay ee kursigaa ku fadhiista gollaha Baarlamaanka Soomaaliya.
Tartanka Guddoomiye ku xigeenka labaad oo aannay sahlanayn loollanka loo galay, waxa ku tartamay xildhibaan Cabdullaahi Cumar Abshir iyo Xuldhibaan Mahad Cabdale Cawed, waxaase ku guulaystay inuu noqdo guddoomiye ku xigeenka labaaad xildhibaan Cabdullaahi Cumar Abshir oo helay146 cod, iyadoo xildhibaanka la tartamayay Mahad Cabdalla Cawad uu helay 95 cod.
Doorashada labada guddoomiye ku xigeen ayaa daba socotay, kaddib markii Arbacadii lagu doortay Teendhada Afasiyoone Guddoomiyaha Aqalka hoose ee Baarlamaanka dawladda Federaalka ee Soomaaliya,Shiikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, waxanaa labada guddoomiye ku xigeen loo dhaariyay dedgdeg, iyadoo wixii hadda ka danbeeya loo dhegtaagayo doorashada Madaxweynaha oo aan weli la cayimin, taas oo labada golle laga sugayo.
Dhinaca kale, Madaxweyne Faramaajo iyo ra’iisal wasaare Rooble, ayaa labaduba hanbalyeeyay labada guddoomiye ku xigeen ee la dooray Khamiistii, waxayna u rajeeyeen in ay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah, sidoo kale madada maamul gobolleedyada Hirshabeele, Koonfur Galbeed, Puntland, Jubbaland, ayaa u hanbalayeeyay labada guddoomiye ku xigeen ee Baarlamaanka Soomaaliya.